Shirqoolo Lala Damacsan Yahay Madaxweyneyaashii Hore Ee Jamhuuriyadda Soomaaliya – Banaadir weyne
Shirqoolo Lala Damacsan Yahay Madaxweyneyaashii Hore Ee Jamhuuriyadda Soomaaliya
Muqdisho – Warar aad loogu kalsoonaan karo oo soo gaaray Warbaahinta Banaadir Weyne (The Great Banadir Media) isla markaana kasoo gaaray Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxey sheegayaan in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu degsaday qorshooyin halis ah oo lagu waxyeeleynayo Madaxweyneyaashii Hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya sida Mudane Xasan Shiikh Maxamuud, Mudane Shariif Shiikh Axmed, iyo Mudane Cali Mahdi Maxamed.
Warka wuxuu ku darayaa in fulinta qorshahan halista ah uu u xilsaaran yahay Taliyaha Ciidanka Nabadsugida (NISA: National Intelligence and Security Agency) Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
24-tii Luuliyo ee sanadkan ay aheyd markii uu qaraxa ka dhacayay Xarunta Gobolka Banaadir isla markaana uu geysanayay qasaaro isugu jiray dhaawac iyo dhimasho.
Dadkii qaraxaasi ku dhintay waxaa kamid ahaa Gudoomiyehii Gobolka Banaadir, ahaana Duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yariisow).
Sababihii qaraxaasi ka dambeeyay, ayaa waxaa kamid ahaa sida la ogaaday, in Gudoomiyehii Gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yariisow) uu diiday qorshe halis ahaa oo ay wateen Madaxweyne Farmaajo, Ra’isulwasaare Kheyre iyo Taliye Nabadsugid Fahad Yaasiin.
Qorshaha uu diiday wuxuu ahaa in la hubeeyo Dhalinyarada Xoogagga Wadaniyiinta isla markaana loo adeegsado Mucaaradka Dhaliishan Siyaasada Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’isulwasaare Kheyre; waxaana ku xigtay in qarax xoogan uu ka dhaco Gudaha Xarunta Gobolka Banaadir ee Muqdisho taariikhda marki ay aheyd 24-tii Luuliyo 2019-kii.
4-tii bishan ee Oktoobarne, waxaa goodiyay Taliye Kuxigeenka NISA oo soo dhigay Twitter-kiisa in gacan bir ah lagu qaban doono Madaxweyneyaashii Hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.